Japana: Romana fahiny any amin’ny trano fandroana iraisana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2010 22:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, македонски, 简体中文, 繁體中文, русский, English
Inona ny zavatra mampitovy ny kolontsaina roa mifanalavitra ara-potoana sy toerana tahaka an'i Roma fahiny sy Japana amin'izao fotoana?
Mety ho ankamantatra ho an'ny maro izany fanontaniana izany kanefa dia nanome aingam-panahy ilay mpanoratra manga Mari Yamazaki [ja] hamorona ny Thermae Romae (テルマエ・ロマエ), manga voalaza hitarika sokajy iray vaovao – ny manga ‘fandroana’.
Marina tokoa fa ny ‘fandroana’ no valin'izany fanontaniana izany. Ny toerana fandroana iraisana izay sady toerana fifanenana no fandroana mba hanalana ireo sorisory tamin'ny asa nandritra ny tontolo andro no mampifandray an'i Roma fahiny sy Japana ankehitriny sy taloha.
Voafidy ho manga tsara indrindra tamin'ity taona ity ny Manga Taisho (Loka Lehiben'ny tantara an-tsary), manga nosoratana mpankafy ny kolontsaina Italiana sady manam-pahaizana amin'izany, mampisongadina ny tantaran'ny Lucius, mpanao marintranon'ireo fandroana ampiasaim-bahoaka tany Roma fahiny izay, lany aingam-panahy, ka lasa tany amin'ny ho avy tamin'ny fomba tsy mazava, avy any amin'ny taonjato faharoa mialoha ny nahaterahan'i Kristy ka lasa aty amin'i Japana amin'izao fotoana. Tao anatin'ilay boky voalohany nivoaka tamin'ity tantara mitohy ity, lasa tany amina fandroana Japoney mafana iraisana sy spa eny an-kalamanjana izay nahitany ireo olona manana teknolojia mahatalanjona sy mivoatra miaraka amin'ireo “fomba fanao hafahafa”.
Nizara ny eritreriny voalohany taorian'ny namakiany ny Thermae Romae ny mpandinika manga iray[ja].
Tsotra ilay tantara, fa nampihomehy ahy ny toetran’ ‘Andriamatoa Lucius’ sy ny fitondran-tenan'ireo “antokon'ny tarehy fisaka”.
Ilay anarana “antokon'ny tarehy fisaka” no tena nampihomehy ahy hatramin'ny voalohany.
Tahaka ny maha hetsika sosialy ho an'ireo mponina tany Roma fahiny ny fankanesana any amin'ny fandroana iraisana, dia fomba nentim-paharazana any Japana ny maka fotoana hialan-tsasatra any amin'ny fandroana iraisana (sento 銭湯) aorian'ny asa nandritra ny tontolo andro na mandritra ny faran'ny herinandro any amin'ireo ranomafana (onsen 温泉), voahodidina zava-boahary.
Raha tena samihafa aza ny mari-tranon'ireo trano fandroana Romana [en] sy Japoney [ja] eo amin'ny lafin'ny toetoetry ny trano, dia azo lazaina ho niampita fotoana sy toerana kosa ny votoatin-kevitry ny fandroana mirona kokoa ho tahaka ny fombafomba noho ny fitadiavan-kidio.
Umi Urimasu dia niteny fa talanjona izy [ja] tamin'ny fahafantarany, voalohany indrindra avy amin'ity manga ity, fa nanana fandroana mbola nivoatra sy mbola sarotra noho ny an'ny Japoney ny Romana.
Ho voatarika avy hatrany ianao dieny vao manomboka ny sehatra voalohany, izay manomboka any amin'ny fandroana iraisana tena be kotaba any Roma. Misy ireo olona no milalao esheky (fanorom-bazaha)! Misy ireo olona no mitolona! Misy ireo olona no mikosoka ny hodiny amin'ny fikosehana! Misy ny mpivarotra mofo mamy ary manao fanalàna volo ho isan'ny asany ny any amin'ny fandroana! Inona ity? Mbola malalaka lavitra noho ireo fanetezanm-bolo any Japana tamin'ny fotoanan'ny Edo izany [tany amin'ny taonjato faha 18-19 tany].
Raha ny fijerin'olona amin'izao fotoana, dia sarotra ny mino fa zavatra nitranga tany Eoropa tamin'ny 2000 taona lasa izany. Ny zava-miseho dia mahatalanjona fa misy hifandraiany amin'ny efa mahazatra ireo Japoney izany, mikasika ireo “fandroana” izay tahaka ny tranom-panahy. Mahagaga ny mahafantatra fa mankafy ny fandroana amin'ny fomba mitovy amin'ity isan'andro koa ireo Romana.
Na dia tsy tena avy any Japana aza ny kolontsainan'ny fandroana, niteny ny mpitoraka blaogy Lowrence fa tokony hirehareha amin'izany ireo Japoney.
Na dia amin'ny lafin'ny karazany aza, mihevitra aho fa mety voasokajy ho manga mahatsikaiky izy io, dia tsy dia fahita sy vaovao ihany aza.
Manomboka any Roma fahiny, ity tantara ity dia mikasika ny mpanao ny sarisary any amin'ireo fandroana iraisana antsoina hoe Lucius, izay tampoka teo dia lasa tany amina fandroana iraisana any Japana amin'izao fotoana. Ny zavatra mampihomehy dia ao anatin'ity manga ity, mandray ireo zavatra tsy misy dikany ho tena marina ireo mpandray anjara. Mialoha ny toko tsirairay dia misy teny fampidirana mikasika ny toetoetran'i Roma fahiny mahaliana.
Indraindray, tsy dia mijery loatra an'ireny asa ampirisihan'ny gazety hovakiana ireny aho nefa tamin'ity indray mitoraka ity dia faly aho nividy izany. Ny manga izay mampihomehy anao ndraindray dia mahafinaritra ary mihevitra aho fa ny kolontsainan'ny fandroana Japoney dia mahatalanjona. Taorian'ny fandehanana fotoana vitsivitsy tany ivelany, dia vao maika mino izany aho. Ho ela velona ny fandroana!
Ny mpanoratra Mari Yamazaki dia niteny tao amin'ny blaoginy fa ny hevitra niatombohan'ity [ja] manga ity dia efa tamin'ny fahazazany.
Nanao ny sary an'ity manga ity tamin'ny aigam-panahy sahala tamin'izaho nanao ireo sary hafahafa mba hampihomehezana ireo namako tamin'ny ambaratonga voalohany aho. Nandaitra izany aigam-panahy mazava sy mampifaly izany ary dia nofidiana ho avoaka. Nanontany tena ary aho raha tsy naninona ny namoaka ity manga natao hampihomehy vondron'olona voafetra ity.
Gaga aho, maro ireo olona miteny fa mahatsikaiky ilay izy. Faly aho! Misaotra anareo!
Nanapa-kevitra ny hamoaka antsipiriany kely mikasika ny boky manaraka izay hivoaka any Japana amin'ny volana Septambra ihany koa ilay artistan'ny manga any Chicago [ja]…
Voasokajy ho “manga fandroana” ny Thermae Romae, na dia tsy tena misy aza ny sokajy tahaka ity. Raha ny tao an-tsaiko, manao manga mikasika ny “fanoharana ireo kolontsainan'i Roma fahiny sy Japana” aho, mampiasa ilay fandroana ho mpanelanelana. Tsy manga mikasika ny olona Romana taloha izay talanjona rehefa mahita fandroana Japoney izany.
Raha ny marina, tsy ny fandroana irery ihany no zavatra mampitovy an'i Japana sy Roma fahiny – mbola misy zavatra maro. Ankoatra izany, na dia tsy lehilahin'i Italia amin'izao fotoana aza ny mpandray anjara, noforoniko ho olona tahaka ireo lehilahy tena matotra any Japana izany.
Noho izany, roa taona izay rehefa nandresy lahatra ahy amin'ny hamoahana izany ho tantara mitohy ny mpanonta ny bokiko, nieritreritra aho hoe mety ho tombontsoa lehibe handrosoana bebe kokoa ny resaka mikasika an'i Roma fahiny. Ny boky voalohany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fahagagan'i Lucius amin'ny fahitany ny fandroana Japoney sy ireo fombafombany. Miaraka amin'ny fampahafantarana ny mpandray anjara mahafinaritra tahaka an'i Adrianus (anisan'ireo mpanjakan'i Roma 5 malaza indrindra), dia hahita zavatra maro amin'ny andavanandron'ireo Romana izay hinoako fa hisarika ny mpamaky ianareo.
Afaka vakiana ato amin'ity rohy ity(amin'ny teny Japoney ihany) ihany koa ilay manga.